Florence. Ọ na-apụta site na amaghị onwe ya wee kwuo: "M nwụrụ na m hụrụ Chineke. Ana m agwa gị ihe eluigwe dị ka" | Blọọgụ nke ekpere
Florence. Na-apụta site na coma ma kwupụta: "M nwụrụ wee hụ Chineke. Ana m agwa gị ihe eluigwe dị ka"
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 5, 2020 Maggio 5, 2020
Ihe omume a na-enweghị atụ na Florence. Otu nwanyị dị afọ 46 si na Coma nke ndị dọkịta, ruo ụnyaahụ, weere na ọ nweghị mgbanwe. Mgbe afọ iri gasịrị, nwanyị ahụ lọghachiri ikwu okwu; ahịrịokwu mbụ o kwuru bụ: “Ahụwo m Chineke”.
Ndị nta akụkọ na-ewute ya, ọbụlagodi Dr. Romano Franco, onye sorola okwu ya site na mbido, tụrụ aro ka ọ ghara inye ya nsogbu oge awa iri abụọ na anọ mbụ, ọ sịrị karịa: “Anọwo m n'Eluigwe. Enwere akwa ahịhịa a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọkụ dị elu mgbe niile. Enweghị ajọ ihu igwe na mwute dị ebe ahụ. Onye ọ bụla na-eme ọ happyụ na ị nwere ike ofufe. Puku puku abụọ enwere ike ịdị ndụ. Nke kachasị, enweghị mkpa dị ugbu a iji gboo, enweghị onye agụụ na-ata ahụhụ, onweghị onye na-ata ahụhụ site na oyi, okpomoku ma ọ bụ mgbu. Ike pụrụ iche dakwasịrị ihe ndị dị n’elu. Onweghi onye n’enwe obi iru uju ma obu obi ilu, ezinaulo ndi mmadu nwere ike karita ma zute ozo. Onweghi ike omume imejọ mmadụ, a na-ahụ okwu dịka ọ continuousụ na-aga n’ihu ”.
Nye onye nta akụkọ ọ jụrụ nwoke ihe Chineke dị, ọ zara, sị: “Chineke, ọ bụ ezigbo nna. M ga-ekwu na aesthetically ọ dị ka ezigbo nwa afọ 50, ọ na-aghọta ma nso onye ọ bụla. Ihe kacha ju m anya bu na onweghi mgbe nile ndi edoziri edozi. Chineke na-agbadata n'etiti mmadụ niile nọ ebe a ma na-egwuri egwu ma sorokwa ha nwee ntụrụndụ. Nso utịbe utịbe edidi ntem ke ama akakpa. Mana ugbu a, Simona alọghachila n'etiti ndị dị ndụ, ọ tụleghachila ndị ọ hụrụ n'anya ma yie ka ọ nwere obi ụtọ. Knowsnye mara ma oge ụfọdụ ọ chọghị inweta ndụ n'eluigwe.
← Na post gara aga Gara aga post:Mụta "ihe nyocha" site na akụkọ a
Ọzọ Post → Post ozo:Anyị na-eme ihe kachasị mma kwa ụbọchị na ndụ Ndị Kraịst